ဝယ်ပါ Ethynyl estradiol (57-63-6) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟော်မုန်းမြှင့်တင်ခြင်းလိင် / Ethynyl estradiol (၅၇-၆၃-၆)
SKU: 57-63-6. အမျိုးအစား: ဟော်မုန်းမြှင့်တင်ခြင်းလိင်
AASraw သည် CGMP စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ခြေရာခံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အောက်ရှိဂရမ်မှ Ethynyl estradiol (57-63-6) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိသည်။
Ethynyl estradiol (57-63-6) ဗီဒီယို
ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ: ထုတ်ကုန်အမည်: Ethynyl estradiol
CAS အမှတ်: 57-63-6
S.ရာဝတီ: က CP, EP, USP, IP ကို
သိုလှောင်မှု: ခြောက်သွေ့သော၊ မှောင်မိုက်သောကာလနှင့် ၀ မှ ၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ကာလတို (ရက်သတ္တပတ်များအထိ)
Ethynyl estradiol (57-63-6): Description:
Ethinyl Estradiol အမှုန့်သည် semisynthetic estrogen ဖြစ်သည်။ Ethinyl estradiol ၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားသည် Estrogen Receptor Agonist အနေဖြင့်ဖြစ်သည်။ နှုတ်အားဖြင့်၎င်းကိုအက်စထရိုဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေပြီးခံတွင်း contraceptives များတွင် estrogenic component အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ Ethinyl estradiol သည်အီစထရိုဂျင် receptor ရှုပ်ထွေးသောနှင့်ပေါင်းစည်းပြီးအီစထရိုဂျင်ဆယ်လူလာတုံ့ပြန်မှုများတွင်ပါ ၀ င်သောမျိုးဗီဇ၏ DNA ကူးယူခြင်းကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားသည်။ ဤသည်အေးဂျင့်သည် epididymal တစ်သျှူးတွင် 5-alpha reductase ကိုတားစီးသည်။ ၎င်းသည် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကိုလျော့နည်းစေပြီးဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၏တိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။ ၎င်း၏ antineoplastic သက်ရောက်မှုများအပြင် ethinyl estradiol သည်အရိုးပွရောဂါမှကာကွယ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင်ဤအေးဂျင့်နှင့်အတူရေတိုကုထုံးသည်ရင်သားကင်ဆာမှရေရှည်ကာကွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်၊
၁။ Archer DF၊ သောမတ်စ်အေ၊ Conard J၊ Merkatz RB, Creasy GW, Roberts K, Plagianos M, Blithe D, Sitruk-Ware R. Nestorone®နှင့်တစ်နှစ် contraceptive မိန်းမအင်္ဂါလက်စွပ်အားဖြင့် Hepatic estrogen-sensitive protein များအပေါ်သက်ရောက်မှု ethinyl estradiol ။ သန္ဓေတားဆေး။ 1 ဇန်နဝါရီ; 1 (2016): 93-1 ။ Doi: 58 / j.contraception.64 ။ Epub 10.1016 စက်တင်ဘာ 2015.09.008 PubMed PMID: 2015 ။
၂။ Lobo Abascal P၊ Luzar-Stiffler V, Giljanovic S, Howard B, Weiss H, Trussell J. ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်ဥရောပရှိပုလဲအညွှန်းကိန်းများအစီရင်ခံရာတွင်ကွဲပြားခြားနားမှုများ - ၉၁ ရက်ကြာတိုးချဲ့သော - ပေါင်းစပ်ထားသောပါးစပ်တားဆေးကိုအာရုံစိုက်ခြင်း။ Ethinyl estradiol ဖြည့်စွက်ဆေးထိုး။ Eur J Contracept Reprod ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု။2ဖေဖော်ဝါရီ; 91 (2016): 21-1 ။ Doi: 88 / 91 ။ Epub 10.3109 ဇွန် 13625187.2015.1059416 PubMed PMID: 2015 ။
3: Waellnitz K, Duijkers I, Klipping C, Rautenberg T, Rohde B, Zurth C. ။ စင်တာနှစ်ခု၊ ပွင့်လင်းတံဆိပ်၊ သန္ဓေသားတားဆေးသုံးမျိုးနှင့် transdermal contraceptive ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများပါဝင်သောတစ်ခုစီတွင် ethinyl estradiol နှင့် gestodene အမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ ကျန်းမာသောမိန်းမပျို။ J ကို Obstet Gynaecol ။ 2016 ဇန်နဝါရီ; 36 (1): 106-13 ။ Doi: 10.3109 / 01443615.2015.1041882 ။ Epub 2015 စက်တင်ဘာ 30. PubMed PMID: 26421957 ။
4: Patel G, King A, Dutta S, Korb S, Wade JR, Foulds P, Sumeray M. ကျန်းမာသောဘာသာရပ်များရှိအားနည်းသော CYP3A inhibitors atorvastatin နှင့် ethinyl estradiol / norgestimate တို့၏အားနည်းသော CYP2016A inhibitors ၏သက်ရောက်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ J ကို Clin Pharmacol ။ 56 ဇန်နဝါရီ; 1 (47): 55-10.1002 ။ Doi: 581 / jcph.2015 ။ Epub 10 စက်တင်ဘာ 26120010. PubMed PMID: XNUMX ။
AAS ကုန်ကြမ်းပါးစပ်အသုံးပြုမှုများအတွက်သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 98% Raloxifene ကာယဗလမှကုန်ကြမ်းအမှုန့်သို့မဟုတ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများပေးပါသည်။
Raloxifene ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း